မာယာနှင့် အမှန်တရား | Myanmar Digital News
Feb 13,2021 |09:42 |
ဘာတွေဘာတွေ မဆိုင်တာတွေက စပြောနေတာလဲလို့ အပြစ်တင်မစောပါရန် လေးစားစွာ တောင်းပန်ပါရစေနော်။ စိတ်ထဲပေါ်ရာ စပြောမိတာ ခေတ္တလေး သည်းခံပေးပါ။ ဒီလိုပါ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ မိမိက အလွန်ဝါသနာပါခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာလည်း စိတ်ပါဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ သီချင်တော့ လေ့လာစပ်စုမိတာပေါ့။
ရုပ်ရှင်ဆိုတာက သရုပ်ခွဲရင် အပိုင်းသုံးပိုင်းပါတယ် -
(၁) Art အနုပညာ ၊
(၂) Story Telling ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းနဲ့
(2) Pictures ရုပ်ပုံတွေ။
အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီမှာ ကျယ်လည်းကျယ်ပြော။ လေးလည်းလေးနက်တဲ့ ညာရပ်တွေ ပါဝင်နေကြတယ်။ စကားစပ်မိလို့ပါ။ Pkcture ရုပ်ပုံ ဆိုကြပါစို့။ အားလုံးလည်း ကြားဖူးနဝ ရှိကြပြီးသားပါ။ ကင်မရအကွာအဝေး အမျိုး အစားအလိုက် ဒီလိုမျိုး ရိုက်ချက်(၄)မျိုး ရှိတာပေါ့။ ။
(၁) Close up အနီးကပ် မျက်နှာပြည့် ရိုက်ချက် ၊
(၂) Medium short ခါးတစ်ပိုင်းရိုက်ချက် ၊
(၃) Full short တစ်ကိုယ်လုံးပေါ်ရိုက်ချက်နဲ့ ၊
(၄) Long shot အဝေးကနေရိုက်ချက် ။ ဒါတော့တို့လည်း သိပြီးသားပါကွယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။
တကယ်က အကန့်အသတ်မဲ့သဘာဝလောကကြီးကို လေးထောင့် ကင်မရာအပေါက်လေးထဲကနေ ဝင်ကြည့်စေပြီး ငွေရောင်ပိတ်ကားကြီးပေါ်မှာ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်ကို ကြည့်မြင်စေရအောင်ပြသရာမှာ မြင်ကွင်းပြပုံအရ အနီးအဝေး ၊ အကြီးအသေး၊ အနှေးအမြန်၊ အမြန် ၊ အငြိမ်၊ အနိမ့်အမြင့်၊ အလင်းအမှောင်၊ အရောင်အသွေး စတဲ့အချက်များက Picture ရုပ်ပုံတစ်ခုကို Image နိမိတ်ပုံ၊ ပုံရိပ်လွှာအဖြစ် ဖန်တီးဖွဲ့စည်းရတာပဲ။
အနုပညာမြောက်ဖို့ရာ ဒါတွေလိုပါတယ် -
(၁) Composition အထားသို ဖွဲ့စည်းပါဝင်ပုံ ၊
(၂) Colour tone အရောင် အနုအရင့် ၊
(၃) Croping အဖြတ်အတောက် ၊
(၄) Focus အပြတ်အသား အကြည်အပါး ၊
(၅) Lighting အလင်းအမှောင်၊
(၆) size အရွယ်အစား အကြီးအသေး ။
ရုပ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်တာ သာမန်လူ နားလည်နိုင်သမျှ တင်ပြတာပါ။ ရုပ်ပုံ တွေထွက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ကြတာ ကင်မရာသမားရယ်၊ ကင်မရာ ရယ်။ သက်ရှိနဲ့သက်မဲ့ (နာမ်ပိုင်းနဲ့ ရုပ်ပိုင်းပေါ့ဗျာ)အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဒါရိုက်တာရဲ့ လိုလားချက်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ သရုပ်ဆောင် သို့မဟုတ် သရုပ်ဆောင်တွေ သရုပ်ဆောင်နေတာကို အရုပ်ထဲမှာ ခံစားမှုကို ပုံပေါ်အောင် ဖန်တီး(ကူညီ)ဖို့ နည်းပညာ Technique တက်ကနိကဗေဒ လိုအပ်ပါတယ်။
Technical skill သာ မကဘူး၊ Art အနုပညာမောယာလည်းပါတယ်။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်အဆင့်မြင့်လာလေလေလှည့်စားမှုတွေဟာ အံ့ဖွယ်ဘနန်း ထူးခြားဆန်းကြယ်လေလေပေါ့။ Tricks ပရိယာယ်။ အဲ့ဒါတွေဟာ အတတ်ပညာ၊ နည်းနာ၊ အနုပညာ၊ မာယာ၊ ပရိယာယ် ဝေဝုစ်၊ လှည့်စားမှု၊ လှည့်ဖြားမှု ညှို့ငင်ခြင်း အနုပညာဖန်တီးမှုထဲမှာ အဲဒါ တွေ ပါဝင်နေတယ်လေ။ အလင်္ကာသဘောလို့ ပြောနိုင်တာပေါ့ ။ စိတ်ကူး Fiction ဖန်တီးတာတွေ ပါတယ်လေ။
Cinematography စီနီမက်တိုဂရပ်ဖီ။ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာဆိုတာ ညာတာ လှည့်စားတာပါ။
လိမ်ညာမှုလို့ မထင်စေရဘူး။ ယုံကြည်အောင် လုပ်နိုင်ရမယ်။
ပရိသတ်မသိစေရဘဲ ပိရိသေသပ်ရမယ်။ Art အနုပညာဆိုတာ ဒါပဲ။ To make believe ယုံကြည်သက်ဝင်အောင် လုပ်တတ်ရတယ်။
ယုံကြည်အောင်လုပ်ထားတဲ့အရာက ဘုပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်အစစ်နဲ့ ခွဲခြားမရတဲ့အတုပါ။ အစစ်ထက်တောင် ဖန်တီရခက်တဲ့အတုပါ၊ အမူအရာလုပ်တာကို မမြင်စေရ။ မသိစေရ၊ အမူအရာ ဖြစ်နေတာကိုသာ မြင်စေ သိစေရမှာတဲ့။ အဲဒါက အနုပညာသဘော။ ဖန်တီးမှုသဘော။ ပရိသတ်ကို လှည့်စားမှု ပြုရတဲ့သဘော။ မတူကွဲပြားခြားနားတာကို သိကြဖို့ပါ။
နိုင်ငံရေးသမားအကြောင်း စာရေးသူ ဘာမှထည့်မပြောလိုဘူး။ ပါတီ နိုင်ငံရေးကို နားလည်း မလည်ဘူး။
သတင်းသမား၊ စာရေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သက်ကြီးစကား သက်ငယ် ဆိုတာလို လူကြီးသူမများ ဆိုမိန့်ခဲ့တဲ့ ကားဆိုရင် တိုတိုရှည်ရှည်၊ နားထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ထည့်ထားရပါတယ်။ ဥပမာ-ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် တာဝန်ကို ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဦးသန့်(၁၉၀၉-၁၉၇၄) ဆိုတာ ကျောင်းဆရာကြီးလည်းမှန်ရဲ့၊ သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာလည်း ဟုတ်ပါရဲ့။ နိုင်ငံတကာက လေးစားယုံကြည်လက်ခံရတဲ့ နိုင်ငံပြုပုဂ္ဂိုလ် ဆိုလည်း မမှားပါဘူး၊ ဦးသန့် ပြောကြားခဲ့တဲ့စကား (၅)ခွန်ရှိတယ်လေ။
(၁) Haveapurpose. ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါ။
(၂) Make it different, တီထွင်ဖန်တီးဆန်းသစ်ပါ။
(၃) Do not take public opinion, အများသဘောမယူနဲ့။ (မှန်တပ်လုပ်၊ တရားဘာလုပ်၊ ကောင်းတာလုပ်ပါ)
(၄) Do not afraid to Fix it. ပြုပြင်ရမှာ မကြောက်ပါနဲ့။
(နည်းဗျူဟာနဲ့ ပတ်သက်တာမှာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မရှိ၊ တက်သာ ဆုတ်သာ မလုပ်တတ်ရင် ပြဿနာအကြီးကြီးနဲ့ ဒုက္ခတွေ့တတ် တယ်။ ထွက်ပေါက်ပိတ်မိတဲ့ အကျပ်အတည်ဆဲ ကျရောက်တတ်တယ်)
(၅) Do not be guiled, အယုံမလွယ်မိပါစေနဲ့။ အလှည့်စားမခံရစေနဲ့။
သတင်းစာဆရာ၊ သတင်းသမားရဲ့ တာဝန်နဲ့ ကျင့်ဝတ်အကြောင်များကို စာရေးသူ ဆောင်းပါးအတော်များများ ရေးသားခဲ့ဖူးပါပြီ။ မကြာမီကပင် သတင်းစာဆရာတွေဟာ အများပြည်သူရဲ့ လေးစားယုံကြည် အားကိုးခံရတဲ့ (Professional Journalists) 2000&:0900cpe of Greogeuleops ရေးလိုက်ပါသေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ သတင်းသမားရဲ့ အဓိကထားရမယ့် အလုပ်တာဝန်အကြောင်း အနည်းငယ် တင်ပြပါရစေ။ အဲဒီလုပ်ငန်းရပ်တွေကို သက်မွေဆမ်ကျောင်း အဖြစ် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်အောင် ကျွန်တော်တို့လည်း ကြိုးစားခဲ့ရ တယ်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင် အမှုထမ်းနေကြဆဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေကြဆဲပဲ။
နေခက်နေခင်လည်း ဒီလုပ်ငန်း ဒီတာဝန် ဒီပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခြေခံ အနှစ်သားရ သဘောတွေက သိမြင်နားလည်ထားရမှာတွေပါ။ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောဆိုနေမိတယ်ထင်ရင်လည်း သည်းခံပါရန် တောင်သန်ရမှာပါ။ ။